ACCA | Nay Lin Aung
Our Hledan Center
"In Strategic Partnership to build tomorrow's business leaders."
Awards from LCCI
We are proud to say that at every international exam, we produced very outstanding students and World Medalist Winners had emerged from our centre.
Our Tarmwe Center
Neat & Tidy Classroom.
We not only provide training for LCCI but also for ACCA and as well as CIMA.
For our students to extend their knowledge.
For our students to haveagood meal.
တာမွေကျောင်းခွဲကို Series 2-2013 မှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ACCA(UK) တွင် အပိုင်း (၃) ပိုင်း ရှိပါသည်။
( Part I ) Knowledge Module (3 Papers)
( Part II ) Skill Module (6 Papers)
F7 - Financial Reporting ~ (Dip IFR)
( Part III ) Professional Level (5) Papers
ACCA(UK) ၏ Qualification တစ်ခုဖြစ်သည့် Certified Accounting Technician (CAT) ၏ Advanced Level ဖြစ်သော
Foundations in Accountancy (FIA) ~ Same as ACCA(UK) Part(I)
FAB - Foundation in Accountant in Business ~ Same as ACCA(UK) - F1
FMA - Foundation in Management Accounting ~ Same as ACCA(UK) - F2
FFA - Foundation in Financial Accounting ~ Same as ACCA(UK) - F3
ACCA(UK) ဘာသာရပ်များကို တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး သူများနှင့် LCCI Level (III) ပြီးဆုံးသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ACCA(UK) ဘာသာရပ်များအား တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ် မတက်ရောက်ရသေးသော ကျောင်းသား/ သူများ အနေနှင့် တက်ရောက်သင်ကြားလိုပါက LCCI Level (III) Diploma ရရှိထားခြင်း ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ACCA(UK) ၏ Part (I) Knowledge Module မှ F1, F2, F3 ဘာသာရပ် (၃) ခု နှင့်တူညီသော ACCA (UK) ၏ Qualification တစ်ခုဖြစ်သည့် Certified Accounting Technician (CAT) ၏ Advanced Level ဖြစ်သော Foundations in Accountancy (FIA) Program မှ FAB, FMA, FFA ဘာသာရပ် (၃) ခု ကို စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ACCA ပြီးမြောက်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ စုစုပေါင်း (၁၄) ဘာသာနှင့် Professional Ethics Module ဖြေဆို အောင်မြင်ရပါမည်။
ACCA Part (I) Knowledge Module ၏ F1, F2, F3 ဘာသာရပ် (၃) သို့မဟုတ် FIA program ၏ FAB, FMA, FFA ဘာသာရပ် (၃) ခု အား ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးပါက ACCA (UK) မှ ပေးအပ်သော Diploma in Accounting and Business ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
ACCA(UK) ၏ Fundamental Level -9Papers (Part I မှ3Papers နှင့် Part II မှ6Papers) အား ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများ အနေဖြင့် Professional Ethics Module ကို ထပ်မံဖြေဆိုပြီး Advanced Diploma in Accounting and Business ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
ACCA(UK) ၏ Fundamental Level -9Papers အား ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး၍ အောက်ပါ အချက်အလက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက Oxford Brookes University မှ ပေးအပ်သော B.Sc (Hons) Degree in Applied Accounting ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ACCA ၏ Fundamental Level Paper များ ဖြစ်သော F1 to F9 ကို (၁၀) နှစ် အတွင်း ဖြေဆို အောင်မြင်ထားရမည်။
Fundamental Level Paper F1 to F9 အောင်မြင်ပြီးပါက ACCA ၏ Professional Ethics Module ကို ဖြေဆိုပြီး စာလုံးရေ (6,500) ပါရှိသော Research & Analysis Project ကို Oxford Brookes University သို့ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။
မိမိရရှိထားသော ဘွဲ့မှ Exemption ရသော Paper များမှာ F4, F7, F8, F9 တို့ ဖြစ်ပါက Exemption မယူကြောင်း ACCA သို့ ကြောင်းကြားရမည်။
Paper F7, F8, F9 တို့ မဖြေဆိုမီ B.Sc Program ကို ရယူလိုကြောင်း ရွေးချယ်ထားရမည်။
မိမိတွင် English Qualification နှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထား IELTS, TOEFL and others) မရှိပါက Paper F4 ကို F7, F8, F9 ဘာသာရပ်များ မဖြေဆိုမီ ဦးစွာ ဖြေဆို အောင်မြင်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
Diploma in International Financial Reporting ( Dip IFR)
ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူများ၊ LCCI Level (III) Diploma ရရှိပြီး သူများ နှင့် Accounting Course တစ်ခုခု ပြီးဆုံးပြီး Accounting Fields တွင် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် လုပ်ကိုင်ပြီးသော သူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Dip IFR တွင် သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်သည် ACCA Part (II) Skill Module တွင် ပါဝင်သော F7 - Financial Reporting ဘာသာရပ် ကို သင်ကြားရမည် ဖြစ်သည်။
Exemption လျှောက်ထားနိုင်သော ဘာသာရပ်များ
CPA - F1, F2, F3, F4
B.Com, B.At - F1, F2, F3, F4
Dip in Accounting (DA Myanmar) - F2, F3
BA(Eco), BA(BM), B.Ecom(Eco), B.Ecom(Stat), BBM - F1
ACCA Part (I) စာမေးပွဲမှာ Computer Based Exam (CBE) ဖြစ်ပြီး လစဉ် စာမေးပွဲ ရှိပါသည်။
ACCA ၏ အခြားစာမေးပွဲများမှာ June နှင့် December တွင် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ဖြေဆို နိုင်ပါသည်။
ACCA Registration Fees မှာ တစ်ကြိမ်သာ သွင်းရန်လိုပါသည်။
FIA တက်ရောက်သော ကျောင်းသားများ အနေနှင့် Registration အရင် လုပ်ရပါမည်။
တက္ကသိုလ်မတက်ရောက်ရသေးသော်လည်း FIA Program မှ FAB, FMA, FFA (၃) ဘာသာအား ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးပါက ACCA Part (II) Skill Module သို့ တက်ရောက်လျှင် FIA Program တက်ရောက်စဉ်တွင် Registration Fees သွင်းထားပြီးပြီ ဖြစ်သောကြောင့် Registration Fees အား ထပ်မံ ပေးသွင်းရန်မလိုဘဲ ACCA Part(II) Skill Module သို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ACCA Part I အတွက် Exemption Fees လည်း ပေးရန်မလိုဘဲ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Registration ရပြီးသော ကျောင်းသားများ အနေနှင့် ACCA Annual Fees ကို နှစ်စဉ် ပေးသွင်းရပါမည်။
Annual Fees ကို နှစ်စဉ် January 31 ရက်တွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ACCA Registration Fees & Annual Feees
Registration Fees - US $ 130.00
Annual Fees - US $ 130.00
ACCA Part (I) Knowledge Module - 150,000/- Ks per subject
ACCA Part (II) Skill Module - 170,000/- Ks per subject
Dip IFR - 190,000/- Ks per subject
ACCA Part (I) Knowledge Module - around US $ 120.00 per subject
ACCA Part (II) Skill Module - around US $ 135.00 per subject
Dip IFR - around US $ 350.00
ACCA နှင့် Dip IFR Registration ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ
ဘွဲ့မရသေးသော ကျောင်းသား/သူများ အနေဖြင့်
Accounting နှင့် ပတ်သက်၍ Certificate/ Diploma မိတ္တူ (၂) စုံ
Exemption လျှောက်မည့်သူများ တက္ကသိုလ် First Year to Final အမှတ်စာရင်း မိတ္တူ (၂) စုံ
Dip IFR Registration လုပ်မည့်သူများ Accounting Field တွင် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် ရှိကြောင်း ထောက်ခံစာ မိတ္တူ (၂) စုံ ပေးရပါမည်။
NLA ၏ ကျောင်းသားဟောင်းများ အနေဖြင့် နှစ်နှစ်အတွင်း ACCA, Dip IFR ဘာသာရပ်များ ဆက်လက် တက်ရောက် သင်ကြားမည်ဆိုပါက တစ်ဘာသာလျှင် 10,000/- ကျပ် Discount ရရှိပါမည်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းအား Series ဆက်တိုက် ပြန်လည် တက်ရောက်သင်ကြားမည် ဆိုပါက 50% Discount ရရှိပါမည်။
ACCA နှင့် DIF IFR စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်မှုမရ၍ကျရှုံးသော ဘာသာရပ်များအား Series ဆက်တိုက် ပြန်လည်တက်ရောက်မည်ဆိုပါက 10,000/- ကျပ် သွင်းပြီး ပြန်လည် တက်ရောက်သင်ကြား နိုင်ပါသည်။
ACCA နှင့် Dip IFR အား Series တစ်ခု ကျော်၍ ပြန်လည် တက်ရောက် သင်ကြားမည်ဆိုပါက 50% Discount ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
01 504737, 512900, 095170105, 01 73108409
All Rights Reserved © Copyright by Nay Lin Aung Finance & Accountancy Academy